जहाँ एक प्याकेट बिस्कुटको लागि शरीर सुम्पिन्छन्
राधा पोखरेल बिहीबार, चैत २८, २०७५ मा प्रकाशित
'धेरै त हैन , सय , पचास , बिस, तिस नभए एक प्याकेट को लागि भए पनि रात बिताउँछौ ! यदि ग्राहक आएनन् भने त्यो रात हाम्रोमा अगेनो बल्ने छैन ! यसो ग्राहक आएपनि हुन्थ्यो नि कम्तिमा रोइरहेका लालबाला त चुप लाग्थे !'
यो शब्द सुदुरपश्चिमको दुरदराज जिल्ला बझाङको सदरमुकामको चैनपुरको हो ! जहाँ जिवन धान्नका लागि यौन धन्दाबाट जिवनयापन गरिरहेका पिडित वादी महिला हरुको हो ।
सदरमुकामको नजिकै भएपनि जहाँ यस्तो सुकुम्बासी समुदाय बस्छन ! एक प्याकेट बिस्कुटको लागि शरीर सुम्पिन्छन् !
गएराती एउटा YOUTUBE भिडियो देखेँ ! न रूनु, न हाँस्नु । न रिसाउनु, न बौलाउनु ? किंकर्तव्यविमूढ भएँ एकछिन भावशून्य भएर टोल्हाएँ ।
आक्रोश र घृणा एकसाथ ज्वालामुखी बनेर बिस्फोट हुने खबर १६ मिनेटको भिडियो ७ पटक दोहोर्‍याएर हेरें हुँला । चटक्कै मुटु चुँडिने खबर । जतिपटक हेर्‍यो, त्यतिपटक झनझन आँखाका खोंचहरू आँसुले भरिएर आए ! म भक्कानिए , विक्षिप्त नै भए, बादी महिलाको पिडालाई जति सम्झियो त्यति पटक वलिन्द्र आँशुका धारा झार्दै मनभित्र आँधी मात्र होइन, सुनामी नै चल्यो । गिदी उम्लिएर टाउको पड्कनै लागेको बम जस्तै भयो । मेरो मुटुमा १० रेक्टरको भूकम्पको कम्पन पैदा भइरहेको थियो । शरीर पसिनाले लपक्क भिजेको थियो । म आँखा खोल्न सक्ने अबस्थामा थिँइन।
बाह्र परिवारका सदस्य छ घरमा करिव सत्तरी जना कोचिएर बस्छन ! परापुर्व कालमा घुमन्ते जिवन बिताउने उनिहरु पछि आएर यसरी एकै ठाँउ बस्न थाले । पहिले उनिहरुको मुख्य ब्यबसाय नाच गाँन थियो ! अब अहिले बुढ्यैालिले छोएका र सुत्केरी बाहेक सबै यौन पेसा अपनाउने गरेका छन् ! बैकल्पिक पेसा नभएपछि उनिहरु अहिले जिवन धान्नका लागि यौन पेशा चलाएर बिहान बेलुकाको छाक टारिरहेका रहेछन् !
उनिहरुको जिवन यति कष्टकर होला मैले कल्पना पनि गर्न सकेकि थिइन ! आफ्नी श्रीमती, छोरी, बुहारी आफ्नै आँखा अगाडि यौन पेशा गरिरहेको देख्दा कस्तो होला ? तपाइहरु आफै कल्पना गर्नुहोस त एकपटक !
यदि यसो गरिएन भने साँझ अगेनो बल्दैन र सास धान्ने अरु केहि बिकल्प नै छैन उनिहरुसँग ! भबिष्यका कर्णधार बालबालिकाहरूले के संस्कार सिक्छन होलान् ? हे भगवान ! सुन्दा मात्र पनि आंग सिरिंग भएर आउँछ । तैपनि यो बुज्रुक समाज किन बोल्दैन ? हाम्रा राष्ट्रपति किन बोल्नुहुन्न ?
के बादी भएर जन्मिए पछि यौन पेसा नै गर्न बाध्य हुनुपर्ने हो र ?
यो कस्तो बिडम्बना, कस्तो पिडा, अनि कस्तो बाध्यता ?
समाज परिवर्तनको रफ्तारसँगै परम्परागत रुपमा देह ब्यापारलाई नै पेसा बनाएका बादी समुदायले बिस्तारै त्यस्तो काम गर्न छाडिसकेका छन् ! तर जहाँ मैले यस्तो खबर हेरेँ त्यहाँ परिवर्तनको कुनै छनक नै छैन ?
के नारी उपभोगको साधन हो ? नारीलाई नंग्याएर वा किन हामी यस्तो विनाशको बाटो हिंडिरहेका छौं ? समाज र देशका शासकहरू के हेरिरहेका छन् ? समाज र देशको बेइज्जत हुँदा शासकहरूलाई लाज लाग्नु पर्दैन ?
विश्व एक्काइसौं शताब्दीमा छ । ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको विकासले मानव सभ्यतामा अभूतपूर्व क्रान्ति भएको छ । पृथ्वी साँघुरो भएको अनुभूत गर्दैछ मान्छे । सायदनिकट भविश्यमा मान्छे अरु ग्रहमा बसाइँ सर्न सफल हुन्छन् होला । तर, विडम्वना ! हाम्रो देशका हामी नागरिक चरम गरिबीमा बाँचिरहेका छौं ।
एकातिर महिला हिनताबोधले ग्रसित छन् । मानसिक रूपमा आतंकित छन् । शारीरिक रुपमा रोगी बन्दैछन् । अर्कातिर पुरूषहरूले घृणा गर्छन्, अमानवीय व्यवहार गर्छन् । अनि परम्पराका नाममा अभिभावक र यो समाज गर्व गर्छ । सरकार मूकदर्शक बनेर रमिता हेर्छ ।
आर्थिक विपन्नताको कारण कतिपय नेपाली नारीहरू बेश्याबृत्तिमा लाग्न पनि बाध्य छन् । कतिपय होटल, रेस्टुरेन्ट, डान्सबार, मसाज सेन्टर अघोषित बेश्यालय बन्न पुगेको छ । प्रहरी प्रशासनकै मिलिभगतमा त्यस्ता ठाउँहरूमा यौनब्यापार भइरहेको कुरा बेलाबखत मिडियाहरू मार्फत समाचार सार्बजनिक भइरहेका छन् । मलाई लाग्छ स्वईच्छाले कुनै पनि सद्धे महिला बेश्याबृत्तिमा लाग्नै सक्दैनन् । बेश्याबृत्तिमा संलग्न महिलाहरूलाई घृणा गर्नुभन्दा सबैलाई रोजगारी उपलब्ध गराई त्यस्तो घृणित पेसाबाट मुक्त गराउन सिंगै राज्य र समाज किन लागि पर्दैन ?
सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थाहरू गाउँ-गाउँमा च्याउसरी खुलेका छन् र त्यसले बिभिन्न शीर्षकमा बार्षिक अरबौं बजेट बालुवामा पानी बगाएसरी खर्च गरिरहेका छन् । अब त्यस्ता संघ संस्थाहरूले पनि परिणाममुखी काम गर्न जरूरी छ । साथै, नागरिक समाज र त्यसका अगुवाहरूले पनि काठमाण्डौंको तारे होटलहरूमा केही मान्छे जम्मा गरेर उपदेश दिन बन्द गरी जनता बिच गएर चेतना प्रसार गर्न आवश्यक छ । यस अभियानमा राजनीतिक पार्टीहरू, सामाजिक संघ संस्थाहरू, नागरिक समाज सबैले पनि साथ दिन जरूरी छ ।
विकाशको भेल बगाउन लागी परेको वर्तमान सरकारले यि बादी महिलाहरुको रोदन र क्रन्दनलाई सुन्ने साहस गर्ने की नगर्ने ? लोप उन्मुख अवस्थामा रहेका यि जातीको चित्कार सुनेर जो कोहीको पनि भक्कानो फुटेर आउछ । पक्कै पनि नेता ज्यूहरुले चुनाबताका यिनलाई भर्याडस् त अबस्य बनाएकै होलान ! यो नारकिय जीवन विताउन बाध्य परिवारलाई त्यो नर्क कुण्डबाट पार लगाउने तर्फ सरकार लागी परोस भन्न चाहन्छु ।
राधा पोखरेलबाट थप